စာလုံးစာသားကိုဖန်တီးရန်နှုတ်ကပတ်တော်၌အဖြစ် - စကားလုံး - 2019
ကျနော်တို့မြို့တော်အတွက် Microsoft Word ကိုစာရွက်စာတမ်းအားလုံးကိုစာလုံးအောင်
လူမှုကွန်ယက်ကို VKontakte အတွက်ဓါတ်ပုံကိုဖျက်ခြင်း - အတော်လေးသေချာတစ်ခုချင်းစီကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူကိုဖြတ်ပြီးလာသောခါတိုင်းလိုအဖြစ်စီးပွားရေး, ။ တခြားနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်စဉ်သို့သော်ဤရှိနေသော်လည်းလူအတော်များများနေဆဲ, တစ်ချိန်က upload လုပ်ထားတဲ့ပုံဖျက်ခြင်းသာအခြေခံနည်းလမ်းများကိုကိုငါသိ၏။
image ကိုမဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်စဉ်လူမှုတင်ဓာတ်ပုံများအတွက်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးအရာများ၏အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ ကွန်ယက်ကို။ ဒါပေမယ့်ပင်ဒီအလိုလိုသိ tool ကိုအတူမသက်ဆိုင်သည့်အထူးသဖြင့်အမှု၏, နေရာတွေအမျိုးမျိုးကနေဓါတ်ပုံတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရ VK.com အုပ်ချုပ်ရေးနေသူများကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့အကြောင်းပြချက်ဘို့သင့်ကို built-in အလုံအလောက်မရှိကြပါဘူးဆိုရငျ, လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုစံချိန်စံညွှန်းမီအစုကိုဖြည့်တဲ့ third-party application များရှိပါသည်။
ဓာတ်ပုံများ VKontakte ဖျက်ခြင်း
သငျသညျဝက်ဘ်ဆိုက် VK.com ပေါ်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့အခါ, ကဖယ်ရှားရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်ပုံရိပ် downloads, တစ်နည်းလမ်းကိုမှဆက်စပ်ကြောင်းကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်အချို့ကိစ္စများတွင်, သင် image file ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါလျှင်ပင်ပြုလုပ်နေဆဲအားလုံးသို့မဟုတ်အချို့အသုံးပြုသူများသုံးစွဲနိုင်ကြလိမ့်မည်။
စံလုပ်ဆောင်ချက်ကို VKontakte အသုံးပြုခြင်း, တကယ်တော့, သင်လုံးဝမဆိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲ, သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်ရေးဓာတ်ပုံများအပ်လုဒ်လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒီလူမှုကွန်ယက်ကနေဓါတ်ပုံတွေကို၏ဖယ်ရှားရေးအတွက်ပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်, ကလူအပေါင်းတို့သည်စည်းမျဉ်းများအတိုင်းလိုက်နာရန်အရေးကြီးပါသည်။ အထူးသဖြင့်, ကတိုက်ရိုက် Third-party add-ons တွေကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအတော်လေးစံနည်းလမ်းများမဟုတ်ပါဘူး။
သငျသညျအခက်အခဲရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းတချို့အကြောင်းပြချက်ဆိုပါကကို double-စစ်ဆေးအရာအားလုံးမသက်ဆိုင်ဖယ်ရှားရေးအမျိုးအစား၏, action ကိုပြုလေ၏၎င်းထိုသို့အကြံပြုလိုတယ်။ ဒါ့အပြင်သင် startup မှာအယ်လ်ဘမ်အားဖြင့် Self-စုစည်းခြင်းလုပ်ဆောင်လျှင်သင်သည်ဓာတ်ပုံများကိုဖယ်ရှားခြင်း၏ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းနိုငျကွောငျးကိုသိသင့်ပါတယ်။ ထိုကြောင့်, သင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကိုမဆိုဘုံအင်္ဂါရပ်ပေါ်ဓါတ်ပုံကိုဖျက်ပစ်နိုင်စွမ်းကိုဆက်ကပ်။
Method ကို 1: လူပျိုကိုပယ်ဖျက်
တစ်ခုတည်းဓာတ်ပုံကိုဖယ်ရှားခြင်း၏နည်းလမ်းများတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းပုံရိပ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, VKontakte ရဲ့ standard လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်သာသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုမှအပ်လုဒ်လုပ်ထားခဲ့ကြသောသူတို့ဓါတ်ပုံတွေကိုသက်ဆိုင် "ဓာတ်ပုံများ" သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာမျက်နှာပေါ်မှာ။
သငျသညျပုံရိပ်ဖိုင်များကိုကို clean up တဲ့အခါမှာသူတို့ကပွနျလညျထူထောငျမရနိုငျသောကွောငျ့, သတိပြုရကြမည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက် VKontakte သွားပြီးသွားပါ "ဓာတ်ပုံများ" မျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်ဖက်အခြမ်းအပေါ် main menu ကိုမှတဆင့်။
မည်သို့ပင်ဝန်နေရာ, အပိုင်းရှိမရှိ "ဒေါင်းလုတ်" သို့မဟုတ်အခြားအယ်လ်ဘမ်ကိုသင်ဖျက်ပစ်ချင်သောပုံရိပ်ကို select နှင့်ဖွင့်လှစ်။
ရုပ်ပုံကိုရှာရန် toolbar ကို၏အောက်ဆုံးအတွက်ဖွင့်လှစ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်။
သငျသညျမိမိအဘို့စကားပြော, ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ်သမျှအချက်တွေကို၏ "ကိုဖျက်".
သငျသညျအောက်ခြေ toolbar ကိုအသုံးပြုခြင်းမှဖယ်ရှားပစ်မည်သည့်အချို့သောပြုပြင်ထားသော interface ကိုမှမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာသင့်လျော်သောတံဆိပ်များနှင့်အတူသင်ယူနှင့်လည်းကြောင့်နိုင်ပါတယ်အောင်မြင်သောဖျက်ခြင်းဓာတ်ပုံများကို။
သငျသညျမတော်တဆမှုများဖယ်ရှားရေးကိုဖန်ဆင်းသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့စိတ်ပြောင်းကြလျှင်, အုပ်ချုပ်ရေး VKontakte ယင်း၏အသုံးပြုသူများကိုဖျက်ပစ်ပုံရိပ်တွေ undelete နိုင်စွမ်းပေးပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်ထိုစာလုံးပေါ်တွင်ဒီလိုလုပ်ဖို့ "ဓာတ်ပုံကိုဖျက်လိုက်ပါ" စာနယ်ဇင်းများ "Restore".
ကပြောသည် button ကိုနှိပ်, image ကိုအပြည့်အဝအားလုံးအဆင့်နှင့်တည်နေရာအပါအဝင်, ပွနျလညျထူထောငျရလိမျ့မညျ။
ထို့ကြောင့်ရုပ်ပုံများ၏နောက်ဆုံးစွန့်ပစ်ခြင်းအားလုံးယခင်ကပြုသောအမှုလုပ်ရပ်များအတည်ပြုခြင်းနှင့်စေရန်, F5 သို့မဟုတ် Context Menu က (ယွမ်) ဘရောက်ဇာကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စာမျက်နှာကို refresh ။
ကယ်တင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအပါအဝင်ပုံရိပ်ဖျက်ခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်, သင်စံဖိုင်တွေအကြားအကူးအပြောင်းဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်မသက်ဆိုင် Scan ပုံရိပ်တွေများ၏အရေအတွက်, ဖိုင်တွေကိုပယ်ဖျက်သို့မဟုတ် restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
မလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံများကိုဖယ်ရှားပစ်တဲ့ဒီနည်းလမ်းကိုအများဆုံးအကောင်းဆုံးနှင့်သုံးစွဲဖို့အရေးအကြီးဆုံးကတော့, လွယ်ကူပါတယ်။ ဒါဟာဒီနည်းလမ်းကိုအများဆုံးမကြာခဏပုဂ္ဂိုလ်ရေးပရိုဖိုင်းကို VKontakte ၏ပျမ်းမျှအားပိုင်ရှင်အသုံးပြုသည်ဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 2: မျိုးစုံ၏ဖယ်ရှားရေး
သငျသညျ VKontakte အဖြစ်လူအများစုမှအများဆုံးအကျွမ်းတဝင်အတွက်ကြိုတင်ပေးမခံခဲ့ရလူမှုကွန်ယက်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကိုကနေပုံရိပ်တွေကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျလုံခြုံစွာပုံရိပ်တွေနှင့်အတူမျိုးစုံဖိုင်တွေကိုပယ်ဖျက်နိုင်အောင်သို့သော်ဤရှိနေသော်လည်းအနည်းငယ်လမ်းညွှန်ချက်ရှိနေတုန်းပဲ။
ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီ technique ကိုမဆိုဘုံအင်္ဂါရပ်ပေါ်ဓါတ်ပုံဖျက်ခြင်းပါဝငျသညျ။
ဒီထုံးစံ၌ပုံရိပ်တွေကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်စဉ်စစ်ဆင်ရေး VKontakte အယ်လ်ဘမ်မှနီးကပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။
စတင်ရန်, သင်အပိုင်းကိုသွားသင့်တယ် "ဓာတ်ပုံများ" main menu ကိုမှတဆင့်။
ယခုတွင်သင်သည်, ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူယခင်ကဖန်တီးအယ်လ်ဘမ်ကိုရှေးခယျြကျော်သင့်ရဲ့ mouse ကိုပျံဝဲနှင့် icon ကို click ပါရန်လိုအပ်ပါတယ် "တည်းဖြတ်ခြင်း".
သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာအရာအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တယ်လျှင်, တိုက်ရိုက်ဖိုင်များအားလုံးအဖြစ်အယ်လ်ဘမ်ဖျက်ပါမည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ!
အထက်ပါအပြင်ကရွေးချယ်ရေးမှတဆင့်မျိုးစုံ Erase ပုံရိပ်တွေဖျော်ဖြေဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ယင်းဖြစ်စဉ်တွင်သင်သည်သင်၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ဓာတ်ပုံများ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူမည်သည့်ပေးထားသောအယ်လ်ဘမ်မှဖိုင်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အိုင်ကွန်မှတစ်ဆင့်မလိုလားအပ်တဲ့ဖိုင်တွေရှိပါတယ်ရာကိုမဆိုဓါတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်, လုံးဝဖွင့်ပါ "တည်းဖြတ်ခြင်း".
ထိုခဏခြင်းတွင်အသီးအသီးတင်သွင်း image ကို preview ဖို့ကို tick အိုင်ကွန်သတိထားမိ။
ဒီအိုင်ကွန်နှင့်အတူသင်မျိုးစုံဖိုင်တွေရွေးနိုင်သည်။ ဖျက်ခံရဖို့ဓါတ်ပုံအားလုံးကိုဒီ icon ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ပြည့်စုံစင်ကြယ်စေအယ်လ်ဘမ်အစားကို manual ရွေးချယ်ရေး၏ခလုတ်ကိုကိုသုံးပါ "အားလုံးကို Select လုပ်ပါ".
တစ်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးရှာဖွေ link ကို click နှိပ်ပြီး "ကိုဖျက်" အယ်လ်ဘမ်စာမျက်နှာ၏ထိပ်။
သင် functions တွေအပြင်, အယ်လ်ဘမ်ကို manually ဖန်တီးကြလျှင် "ကိုဖျက်"သင်တို့သည်လည်းအားလုံးသိသိသာသာဖိုင်တွေရွှေ့နိုင်ပါတယ်။
ပြတင်းပေါက်မှာခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် action ကိုအတည်ပြု "ဟုတ်တယ်, delete".
အခုဆိုရင်သင်သာပွင့်လင်း 's Page ကိုအလိုအလျောက် update လုပ်ဖြစ်လျှင်, ဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးတိုင်အောင်အစောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စံလုပ်ဆောင်ချက်ကိုကြီးစွန်းကနေတဆင့်မျိုးစုံ Erase ဓါတ်ပုံတွေပေါ်မှာဤထောက်ခံချက်ပါ။
ဤနည်းလမ်းကိုကိုလည်းပထမဦးဆုံးအဖြစ်မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ သို့သော်များစွာသောအသုံးပြုသူများကိုအသုံးပြုရန်မည်သို့မသိရပါဘူး, အဘယ်ကြောင့်, တကယ်တော့အထက်ပေးညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ကြောင်းလည်းမရှိ။
ကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖယ်ရှားရေး, ပြဿနာကိုများစွာသောအကြောင်းတရားများမှကြွလာအထူးသဖြင့်အခါသိမ်းဆည်းထား image ကိုဖျက်ခြင်းဖြစ်စဉ်။ ဤသည်သောအယ်လ်ဘမ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ပါသည် "သိမ်းဆည်းဓာတ်ပုံများ" ကမဖယ်ရှားနိုင်ပါကယင်းအသုံးပြုသူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရှိသမျှသည်အခြားသောအယ်လ်ဘမ်ထဲကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသည်။
သငျသညျကိုဖယ်ရှားနိုင်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုထဲတွင်သိမ်းဆည်းဖိုင်တွေအားလုံးကိုရွှေ့ဖို့မဆိုပြဿနာမရှိဘဲအနည်းငယ်ကလစ်ခွင့်ပြုမယ့်အထူးပြုထို့အပြင်သုံးစွဲဖို့ရှိသည်ဘယ်မှာဒါကဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်သည်ဤလျှောက်လွှာများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်. မစိုးရိမ်နိုင်သည် - ကလူမှုကွန်ယက် VKontakte အများအပြားအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်။
login မှသွားပါ "ဓာတ်ပုံများ".
စာမျက်နှာရဲ့ထိပ်မှာကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အယ်လ်ဘမ်တစ်ခု Create".
မည်သည့်ဘွဲ့နာမတံဆိပ်ရိုက်ထည့်ပါ။ သည်အခြား setting များကိုနဂိုအတိုင်းကျန်ရစ်နိုင်ပါသည်။
ကလစ်နှိပ်ပါ "အယ်လ်ဘမ်တစ်ခု Create".
ကိုသွားပါ "ဂိမ်းများ" main menu ကိုမှတဆင့်။
ရှာဖွေရေး box ထဲမှာ, နာမည်တစ်ခုရိုက်ထည့်ပါ "Moving ရုပ်ပုံ".
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, လျှောက်လွှာဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ interface ကိုရှိပါတယ်, နှင့်အများဆုံးကိစ္စများတွင်, သုံးစွဲဖို့မဆိုအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
လက်ဝဲကော်လံ "တည်နေရာ" drop-down list ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဒီအယ်လ်ဘမ်ကိုရှေးခယျြမထားဘူး" နှင့်သတ်မှတ် "သိမ်းဆည်းဓာတ်ပုံများ".
ညာဘက်ကော်လံ "ဘယ်မှာလဲ" အလားတူယခင် item ကို drop-down စာရင်းကိုသုံးပြီးယခင်ကဖန်တီးအယ်လ်ဘမ်ကိုရွေးပါ။
ထိုအခါသင်သည် click နှိပ်နိုင်ပါတယ် "Create"သစ်တစ်ခုအယ်လ်ဘမ်ပေါင်းထည့်ရန်။
Next ကိုသင်အယ်လ်ဘမ်ပြောင်းရွှေ့လိုသည့်ဓါတ်ပုံများကို select, ပြီးတော့လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ဖယ်ရှားလို။
ဒါဟာ toolbar ကိုများနှင့်အထူးသဖြင့်, ခလုတ်ကိုသုံးစွဲဖို့လည်းဖြစ်နိုင် "အားလုံး".
အယ်လ်ဘမ်အတွက်ဓာတ်ပုံများကို၏နံပါတ်ပေါ်မူတည်သည့်အချိန်, အဆုံးအပြောင်းအရွှေ့လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်စောင့်ဆိုင်းနေ "သိမ်းဆည်းဓာတ်ပုံများ"သင်တို့သည်အယ်လ်ဘမ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်စတင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဒုတိယနည်းလမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူမျိုးစုံဓာတ်ပုံများဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ပြုသောအမှုရမည်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဤလျှောက်လွှာကိုကျေးဇူးတင်သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအယ်လ်ဘမ်ထဲကနေမျိုးစုံပုံရိပ်တွေပေါင်းစပ်နှင့်ဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြည့်စွက်အသစ်ကအင်တာဖေ့စ, VKontakte အတွက်အမှားအယွင်းများခြင်းမရှိဘဲအလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာသည်။
အဆိုပါ built လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်ဆင့်မည်သူမဆိုအတူစာပေးစာယူ၏သင်တန်း၌သငျဓါတ်ပုံကိုစလှေတျပါပွီဆိုရငျ, သူတို့လည်းဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအစာပေးစာယူအမျိုးအစားအားလုံးကိုမှအညီအမျှသက်ဆိုင်, နှစ်ဦးစလုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်အထွေထွေစကားပြောဆိုမှု။
ဒါဟာဖိုင်တစ်ခုဖျက်ပစ်ပြီးနောက်ပြုလုပ်မယ့်သင့်ထံမှပျောက်သွားမှာကိုသတိထားပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ အကြောင်း, လူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နေတုန်းပဲဖယ်ရှားရေးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပဲ, ကိုစလှေတျလျှပ်တစ်ပြက်ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လုံးဝပုံဖယ်ရှားပစ်ရရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း - ဒိုင်ယာလော့ခ်သို့မဟုတ် Arbore ဖယ်ရှားပစ်ရန်။
ထိပ်မှာ icon တစ်ခုကျော်မောက် cursor နေရာ "… " နှင့်ကို select "ပူးတွဲပါ".
သငျသညျကိုဖျက်ပစ်ချင်သောပုံရိပ် Locate နှင့်ဖွင့်လှစ်။
အောက်ခြေ toolbar ကိုတွင်တံဆိပ်များကို click "ကိုဖျက်".
image ကို restore လုပ်ဖို့, ခလုတ်ကိုကိုသုံးပါ "Restore" ထိပ်မှာ။
ဖယ်ရှားရန်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့, browser ကိုစာမျက်နှာ refresh ။
အောင်မြင်တဲ့ deletion '၏အမှု၌, စာမျက်နှာ image ကိုလန်းဆန်းပြီးနောက်အစဉ်အမြဲစာရင်းပေးတဲ့ dialog ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထွက်သွားကြပါသည်။ အရင်းအမြစ်သင်၏ဓါတ်ပုံများဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်နေစဉ်ကံမကောင်းစွာကသာ, သငျသညျမှကိုတိုးချဲ့။
image ကိုဖျက်ခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မှတ်မိဖို့အရေးအပါဆုံးအရာ - သူတို့ပြန်လည်ကောင်းမွန်မရနိုင်ပါ။ ကြွင်းသောအရာများအတွက်, သငျသညျအဘယ်သူမျှမကပြဿနာရှိသင့်ပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေ!